अण्डा भेज कि ननभेज ?::Hamrodamak.com
शाकाहारीहरु अण्डालाई मांशाहारी ठान्छन तर अन्डा के हो ? जनावरका उत्पादन मान्ने हो भने दुध पनि ननभेज हो त ? यस्तै सोच्ने हो भने फेरी अर्को तर्क आउँछ कि अण्डाबाट बच्चा निस्कन्छ, सबै अण्डाबाट बच्चा उत्पादन हुँदैन ।
बजारमा पाइने धेरैजसो अण्डा अनफर्टिलाइज्ड हुन्छ । जुन अण्डाबाट बच्चा उत्पादन हुँदैन । अण्डाबाट त्यतिकै बच्चा उत्पादन हुँदैन । अण्डाबाट बच्चा उत्पादन हुनको लागि केहि चरणहरु पार गर्नुपर्ने हुन्छ ।
जस्तो कि गाउँ-घरमा कुखुराले अण्डा पाएपछी त्यो अण्डालाई त्यतिकै राख्दा बच्चा बन्दैन । त्यसको लागि कुखुरा कोराल्नु पर्छ । बिभिन्न कारण देखाई बैज्ञानिकहरुले भने अण्डा मांशहारी नभएको दावी गरेका छन् । वैज्ञानिकहरुले बिज्ञानको माध्यमबाट यस बिषयको जवाफ दिँदै भनेका छन् – ‘अण्डा शाकाहारी हुन्छ ।’